पोखराका यी दुई चेलिहरु जस्ले सौन्दर्य सम्बन्धि महिलाहरुलाई ज्ञान आत्माविश्वास बाँडदै सुर्खेतसम्म आइपुगे... — Moon Light Khabar
पोखराका दुई चेलिहरु जस्ले सौन्दर्य सम्बन्धि महिलाहरुलाई ज्ञान र​ आत्माविश्वास बाँडदै सुर्खेतसम्म आइपुगेका छन​। खासगरि सौन्दर्य तथा मेकअप सम्बन्धि तालिम दिदै नेपालका विभिन्न शहरहरुमा विना हिच्चकिचाहट रुपमा आफुहरुसंग भ​एको ज्ञान र सिपलाई एक​-अर्कामा साट्दै र फरक​-फरक अनुभव सङगाल्दै हिडेका छन​। प्रस्तुत छ​; सहयोगी सचिन तिमिल्सिना र तेज बहादुर बमले तयार पारेको कुराकानीको केहि अंश​-
तपाइहरुको नाम के हो?
उत्तर​- निशा कार्कि बाँनिया र रिनू गुरुङ​
कहाबाट आउनुभ​एको हो?
तपाईहरु हरेक शहरमा यसरि महिला सौन्दर्य सम्बन्धि तालिम दिदै हुनुहुन्छ, यस्को खास उद्देश्य के?
उत्तर​- तपाई हामिलाई थाहा छ कि महिला-पुरुषहरुको तुलनामा महिलाहरु नै सौन्दर्य सम्बन्धि बढि चासो राख्ने गर्नुहुन्छ​। त्यसमध्ये सबै महिलाहरु ब्युटिपार्लर जान सक्ने हुदैनान किनकि वहाँहरु कतिपयसंग​ पैसा नहुन सक्छ​, कतिपयसंग समय नहुन सक्छ तथा कतिपयसंग सौन्दर्य सम्बन्धि बेसिक जानकारी नहुन सक्छ​। त्यसतो अवस्थामा हामिले सौन्दर्य सम्बन्धि चासो राख्ने महिला दिदिबहिनिहरुलाई कम से कम आफ्नो लागि र घरमै भ​ए पनि मेकअप तथ व्यक्तिगत​रुपमा आत्माविस्वास जागोस भन्ने हेतुले यो कार्यक्रम विभिन्न शहरहरुमा गर्दै हिडेका छौ।
अहिले सम्म कति वटा शहरहरु तथा कहाँ–कहाँ यस्ता कार्यक्रमहरु गर्नु भयो?
उत्तर​- हामिले पोखराबाट सुरुवात गरेका हौ त्यसपछि क्रमश​; चितवन​, मकवानपुर​, धरान​, बिराटनगर, बिर्तामोड​, दमक​, नेपालगंज, स्याङ्जा र अन्तमा सुर्खेत सम्म आइपुगेको हो। यात्रा जारि छ​।
अब कहाँ–कहाँ र कुन​-कुन शहरमा जाने योजना छ​।
उत्तर​- हाम्रो योजना त विस्तारै-विस्तारै नेपालका सबै शहरमा जाने योजना छ​। तर अहिलेलाई धादिङ​, पर्वत, सिक्किम तथा दार्जिलिङ सम्म पुग्ने योजना छ​।
विभिन्न शहरहरुमा यी र यस्तै कार्यक्रमको दौरान​ हाल सम्म कुनै त्यस्तो अप्रत्यासित​ समस्याहरुको सामाना गर्नु पर्यो? मतलब के भने चुनौतिहरु के-के छन​?
उत्तर​- हामिले अहिले सम्म त त्यस्तो कुनै पनि अप्रत्यासित​ समस्याहरुसंग जुध्नु परेको छैन र आशा गरौ कि भविस्यमा पनि त्यस्तो समस्याहरुसंग सामाना गर्नु नपरोस​। अब चुनौति त हरेक काममा छ​। घरबाट बाहिर निस्के पछि नै चुनौति सुरु थाल्छन​। तर​, जब हामिहरु नयाँ-नयाँ नचिनेको ठाउमा पुगछौ र दिदि बहिनिहरुलाई भेट्छौ अनि वहाँहरुलाई हामिसंग भएको ज्ञान अनि अनुभव साट्छौ तब हाम्रा दु;ख तथा थकाई कता मेटिहाल्छ​।
कुनै शहरमा प्रसिक्षार्थिहरुले गर्ने गरेका केहि गुनासाहरु वा त्यस्तो कुनै असयोग छ​?
उत्तर​- नाई त्यस्तो त केहि छैन​। हामिहरुले जहाँ-जहाँ ट्रेनिङ दिदै आईरहेको छौ त्यहा सबैजना निकै खुशि हुनुहुन्छ र धन्यवाद दिनुहुन्छ​।
अन्तमा केहि भन्नुछ ? खास गरेर प्रशिक्षार्थिहरुलाइ?
उत्तर​- यो सौन्दर्य सम्बन्धि तालिम मात्रै नभ​एर एउटा यस्तो ट्रेनिङ हो जहाँबाट महिला दिदिबहिनिहरुले आत्मासम्मान र आत्माविस्वास बढाउने प्लेटफार्म हो। साथ साथै स्वरोजगार बन्ने अनि हातमा सिप राखेर​ बस्ने एक अवसर पनि हो। त्यसैले यस्तो सुनौलो अवसर गुमाउनु हुदैन​ र मौकाको फाईदा उठाउनु पर्दछ​।
प्रकाशित मिति : २०७७ माघ १०, शनिबार